किन मौन छन् सविन ? « Ramailo छ
किन मौन छन् सविन ?
नायक सविन श्रेष्ठ अहिले के गर्दैछन् ? मिडियामा उनको यतिबेला खासै चर्चा छैन । मिडियामा नआएपनि सविन चुपचाप भने बसिरहेका छैनन् । उनी फिल्मको पोस्ट प्रोडक्सन र सुटिङमा व्यस्त छन्। एउटा मात्रै होइन सविन पाँच फिल्मको पोस्ट र सुटिङमा व्यस्त छन् ।
भर्खरै फिल्म ‘काउसो’ को छायाँकन सकाएका सविनले अभिनय गरेको अर्को फिल्म ‘ए सोल्टीनी’ को पोष्ट प्रोडक्सनको कार्य भैरहेको छ भने सुर्य किरण र सृष्टि फ्लोरमा छन् । सविन आफैंले निर्माण गरेको फिल्म ‘हिरो रिटन्र्स’ को पनि पोस्ट प्रोडक्सनको अन्तिम कार्य चलिरहेको छ । ‘हिरो रिटन्र्स’ लाई उनी तिहारपछि रिलिज गर्ने सुरमा छन् । यतिका धेरै फिल्ममा आवद्ध भएर पनि किन सविन चुपचाप छन् त ? म अहिले हल्ला भन्दा पनि काममा व्यस्त छु । हल्ला गर्ने समय पनि आउँदैछ ।